Tungsten - Luoyang kokuzihlanganisa Tungsten-Molybdenum Material Co., Ltd.
I-MOLYBDENUM SILICON ALLOY
Ama-Alloys Asindayo eTungsten
inombolo Atomic 74
inombolo CAS 7440-33-7
mass Atomic 183,84
ukuma 3 420 ° C
abilayo 5 900 ° C
ivolumu Atomic 0,0159 nm 3
Ubuningi at 20 ° C 19.30g / cm³
crystal isakhiwo umzimba ofiphele cubic
njalo ngehele 0,3165 [nm]
Ngokuchichima e uqweqwe eMhlabeni 1.25 [g / t]
Ijubane umsindo 4620m / s (at RT) (induku elincanyana)
ukunwetshwa Thermal 4.5 μm / (m · K) (at 25 ° C)
conductivity ezishisayo 173 W / (m · K)
resistivity kagesi 52,8 nΩ · m (ku-20 ° C)
Mohs ubulukhuni 7.5
Vickers ubulukhuni 3430-4600Mpa
Brinell ubulukhuni 2000-4000Mpa
Tungsten, noma Wolfram, liyisici ikhemikhali uphawu W futhi idijithi kanambambili 74. Igama tungsten livela wangaphambili igama IsiSwidi for the tungstate amaminerali scheelite, tung Sten noma "itshe elisindayo". Tungsten kuyinto metal ezingavamile ezitholakala ngokwemvelo Emhlabeni ninodwa kuhlangene nezinye izakhi zamakhemikhali kunokuhamba ngawodwa. Kwabonwa njengentfo isici esisha ngo-1781 futhi kuqala isehlane njengoba zensimbi 1783. Kuyinto imikhando ezibalulekile zifaka wolframite futhi scheelite.
Element khulula iphawuleka ukuqina yayo, ikakhulukazi iqiniso ukuthi inenani ukuma lwazo zonke izinto wathola, encibilika at 3422 ° C (6192 ° F, 3695 K). Iphinde inenani ukuvala abacaphuni, ngesikhathi 5930 ° C (10706 ° F, 6203 K). inhlanganiso salo izikhathi 19.3 ukuthi lamanzi, ofana noka-uranium negolide, nokunye ngaphezulu (mayelana 1.7 izikhathi) kunalokho ngomthofu. Polycrystalline tungsten kuyinto impahla intrinsically ziyaqothuka futhi kanzima (ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, lapho uncombined), okwenza kube nzima ukusebenza. Nokho, okumsulwa olulodwa-crystalline tungsten kuyinto ductile kakhudlwana futhi kungenziwa wasika nge kanzima steel hacksaw.
Alloys eziningi Tungsten sika izicelo eziningi, kuhlanganise esikhipha light isibani sesigcilikisha,-X-ray amashubhu (njengoba kokubili intambo kanye target), electrode e igesi tungsten arc Welding, superalloys nemisebe ukuzivikela. ubulukhuni Tungsten futhi high density lona izicelo ezempi ngo eyenza umuntu acabange eseZwini projectiles. compounds Tungsten nazo ukucindezelwa kwakuvame ukusetshenziswa njengezaba yelikhono ezimbonini.
Tungsten iyona metal kusukela enkulungwaneni yesithathu inguqulelo uchungechunge ukuthi waziwa ukwenzeka biomolecules atholakala endaweni izinhlobo ezimbalwa bacterium archaea kuphela. Kuyinto element olusindayo eyaziwa kubalulekile kunoma eziphilayo. Nokho, i-tungsten esiphazamisayo molybdenum nethusi umzimba futhi Kuthi anobuthi ukuba ngaphezulu izinhlobo ajwayelekile bezilwane.
molybdenum Ishidi, Tzm Plate , molybdenum Plate, molybdenum Rod, molybdenum, Tzm Ishidi ,